7 jir ah oo xabadkiisu noqdey birqabad fargeetooyinka & biraha qabsanaya – SBC
7 jir ah oo xabadkiisu noqdey birqabad fargeetooyinka & biraha qabsanaya
Wiil yar oo 7 sano jir ah oo u dhashay wadanka Serbia ayaa soo jiitay indhaha caalamka ka dib markii qoyskiisa ay shaaciyeen in uu yahay birqabato ama magnad oo xabadkiisa sidii birqabatadii ugu dhageyaan wax kasta oo la taabsiiyo sida Fargootooyinka, Qaadooyinka, Microphonada, iyo waliba Remote-yada.
Bogdan oo ay xabadkiisa suran yihiin Saxuun & Remote control
Wiilkan oo lagu magacaabo Bogdan ayay waalidkiis ka gaabsadeen inay sheegaan magaciisa oo dhameystiran, waxaana ay u sheegeen wargeyska Mail Online in wiilkooda tan iyo markii uu dhashay uu lahaa mucjisadan.
Laakiin mucsjida uu wato wiilkan ayaa waxaa kaloo ka mid ah in xitaa uu xabadkiisu qabsanayo waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin saxuunta iyo Remote-yada kuwaasi oo aan aheyn bir.
Qoyskan wiilkan waxay sheegeen in wiilkooda aanay u ogoleyn in uu u dhawaado Teleshinada iyo Kumbuyutarada iyagoo taasi ku macneeyey inay damayaan aaladaasi hadii uu wiilkaasi u dhawaado ama uu taabto taasi oo ay sheegeen inay ugu wacan tahay magnet-ka uu wato.
Qaandooyin & Fergootin suran xabadka Bogdan
Mucjisada waxay tahay iyadoo wiilkaasi uu xitaa soconayo isagoo xabadkiisa ay ku raran yihiin tiro qaadooyin & fergeetooyin ah, waxaana kaloo mar marka xabadkiisa la saarayaa digsiga cuntada lagu kariyo oo sida birqabadkii xabadkiisu ugu dhegayo.
Telefishinka MSNB ayaa markii uu ka waramayey mucjisada wiilkan waxaa wariyihii sheekada gunaanadkeeda uu ku soo koobay in wiilkan ay u wanaagsan tahay inaanu ka lumi doonin remote-ka Tv-ga, iyadoo inta badan dadka caadiga ah had iyo goor uu ka lumo remote-ka.
Halkan ka daawo filimka wiilkan ka sheekayna http://www.youtube.com/watch?v=waswY_jUe4Y&feature=related